Dr. Tint Swe's Writings: May 2015
• ၁၉၉ဝ သမားတွေကို စာရင်းချုပ်လို့ရပြီ။ အားလုံးကိုသိတယ်။ သိတယ်ဆိုတာ နာမည်၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊ ကိန်းဂဏန်းကအစ တိတိကျကျသိတယ်။
• ကောင်းတာရော အဲလိုမဟုတ်ပါသိတာသိတယ်။ အလုပ်လုပ်ကြတာရော အဲလိုမဟုတ်တာပါသိတယ်။ စွန့်လွှတ် စွန့်စားတာရော အဲလိုမဟုတ်တာပါသိတယ်။ ဇွဲ ဝီရိယ လုံ့လရှိတာရော အဲလိုမဟုတ်တာပါသိတယ်။
• ၉ဝ သမားတွေထဲမှာ လပိုင်းသာလုပ်ပြသူတွေပါတယ်။ နှစ်နည်းနည်းနဲ့ နှစ်ရှည်သမားတွေပါတယ်။ ထောင်ထဲသမားတွေနဲ့ အိမ်ထဲသမားတွေပါတယ်။ ပြည်ပထွက်ကြတဲ့ ၃၅ ယောက်ကိုတော့ အူမချေးခါး (အူတွင်းချေးခါး) သိတယ်။
• မြောင်းထဲခုန်ချသူတွေကလွဲရင် ကိုယ့်လူတွေလို့ပဲ သမိုင်းထဲမှာရေးမှတ်ထားတယ်။
• ၂ဝ၁၂ သမားတွေထဲကတော့ နည်းနည်းသာသိတယ်။ သူတို့က ၃ နှစ်တည်းမို့ စာရင်းချုပ်ဘို့ တိုလွန်းတယ်။
• ၂ဝ၁၅ သမားတွေကို သိချင်နေတယ်။ ကြည့်နေမယ်။ ၅ နှစ်အကုန်မှာ စာရင်းချုပ်တခုထုတ်ချင်တယ်။
Lung cancer therapy is milestone အဆုပ်ကင်ဆာကုသနည်းမှတ်တိုင်
စမ်းသပ်မှုအသစ်တခုရဲ့ရလဒ်အရဆိုရင် အဆုပ်ကင်ဆာကုသနည်းကနေ အသက်ရှင်နိုင်မှုနှစ်ဆရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့နာရီပိုင်းက ထွက်လာပါတယ်။
Nivolumab ဆေးကနေ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကနေ ကိုယ့်ခုခံစနစ်မသိအောင် ပုန်းအောင်းနေမှာကို ရပ်ပြစ်နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမေရိကနဲ့ ဥရောပက အဆုပ်ကင်ဆာလူနာပေါင်း ၅၈၂ ယောက် American Society of Clinical Oncology အမေရိကန်ကင်ဆာအဖွဲ့အစည်းကနေ သုတေသနလုပ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့နိုင်ငံမှာ အဆုပ်ကင်ဆာကြောင့် နှစ်စဉ်လူ ၁့၆ သန်း သေနေရပါတယ်။
ကင်ဆာဖြစ်လာရင် ပရိုတင်းတမျိုးထုတ်တယ်။ PD-L1 ခေါ်တယ်။ သူတို့ကနေ ခုခံမှုစနစ်ကိုပိတ်ပင်ထားလို့ ခံနိုင်ရည်မရှိ ဖြစ်စေတယ်။ Nivolumab ဆေးသစ်ကို checkpoint inhibitors ချက်ပွိုင့်တာဆေးလို့တင်စားခေါ်နိုင်တယ်။
သုံးနေကြဆေးတွေကနေ အသက်ရှင်နှုန်း ၉့၎ လသာရှိတယ်။ ဆေးအသစ်ပေးသူတွေဟာ ၁၂့၂ လ အထိ ရှင်နိုင်ကြတာ တွေ့ရှိလာရတယ်။ တချို့လူနာတွေက ၁၉့၎ လအထိရှင်တာလည်းရှိတယ်။ စမ်းသပ်မှုအဆင့် (၃) ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Nivolumab ဆေးကို melanoma ခေါ်မှဲ့ကင်ဆာအတွက် အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အရင်အမေရိကန် ဒုသမတ ဂျိုးဘိုင်ဒင် ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးကာလတုံးက ပြောဘူးတာတခု အခုထိ အမှတ်ရနေပါတယ်။ အမှန်ကဒီစကားကို သူ့အရင်နာမည်ကြီးသူတွေက ပြောဆိုသုံးနှုန်းနေခဲ့တာပါ။ ဖန်ခွက်မှာ ရေတဝက်ရှိတယ်လို့ အပြောမျိုးကို အဆိုးမြင်လို့ သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး၊ ရေတဝက်ပြည့်နေတယ်လို့ ပြောတာကို အကောင်းမြင်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အခြေအနေတိုင်းမှာ အမြင်မတူတာရှိစမြဲဖြစ်တယ်။ အကောင်းဖက်ကနေ မြင်ပါလို့ ဆုံးမတဲ့ အသုံးမျိုးဖြစ်တယ်။
ဒီစကားစုဟာ ဒဿနိကမေးခွန်းတခုဖြစ်တယ်။ စိတ်ပညာမှာ အဲလိုပြောသူရဲ့ သုတအခြေခံပြီး ရွေးချယ်ပြောဆိုမှုကို နားထောင်ရသူတွေကနေ အကဲဖတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအဆုံးအမမျိုးက လိုအပ်တာအမှန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာက တမျိုးပါ။
ကျရှုံးမှုတို့ အနုတ်သဘောတို့ကိုပြောသူမျိုးဟာ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်တဲ့သူမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ စီပွါးရေးသမားတွေရော နိုင်ငံရေးသမားတွေကပါ လက်ကိုင်ထားကြပါတယ်။ အဲလိုလူတွေဟာ စည်းစိမ်၊ ရာထူး၊ အာဏာမှာ မြဲကြတယ်။ ကြီးပွါး ချမ်းသာကြတယ်။ လောကကြီးမှာ ချမ်းသာတဲ့သူက နည်းတယ်မဟုတ်ပါလား။ ချမ်းသာချင်သူကတော့ လူတိုင်းလို့ ပြောရင် စကားမလွန်လောက်ပါ။ ဒါဖြင့် ဘာလို့ အဲလိုအဆုံးအမမှာ မတည်ကြတာပါလည်း။
စကားပြောကောင်းသူလို့ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ဘွိုင်းလ် ရိုခ် ခေါ်တဲ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရေးသမားက သူ့တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒုက္ခသုက္ခတွေကို ထောက်ပြရာမှာ အိုင်ယာလန်ရဲ့ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာခွက်ပေါ်မှာ လျှံကျနေအောင် သွန်းလောင်း နေတာကတော့ ရာစုနှစ်တွေကြာနေပြီ၊ ခုထိ တဝက်ပြည့်တယ်လို့ မရှိသေးဘူးတဲ့။
ကနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို အကဲဖြတ်တယ်။ အရင်ကလို စစ်တပ်က ရာနှုန်းပြည့်ယူမထားတော့ဘူး။ အစိုးရ မကောင်းတာလည်းပြောနိုင်ပြီ။ ရေးချင်တာလည်းရေးနိုင်ပြီ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ထောင်နိုင်ပြီ၊ ရွေးကောက်ပွဲလည်းဝင်နိုင်ပြီ၊ စသဖြင့်။ အဲတော့ ဖန်ခွက်မှာအပြည့်မဟုတ်တောင်မှ တဝက်ပြည့်နေပြီ။
ကျွန်တော့်အမြင်က တမျိုး။ မှောက်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ကို လှန်လိုက်တာပဲရှိသေးတယ်။ မလှန်ခင်က ဖြည့်ချင်သလောက်က ဖြည့်ထားပြီးသား။ မှောက်ထားတုံးက မှောက်ထားတယ်လို့ မပြောခဲ့ကြရင် ဖန်ခွက် ပက်လက်ဖြစ်မလာတော့ပါ။ မပြည့်သေးတာတွေကို ပြောကိုပြောရမယ်။ ပြောတဲ့သူက အဆိုးမြင်မဟုတ်ပါ။ ပြောတာကို မလုပ်သူကသာ ဆိုးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကို အကောင်းမြင်ကြပါလို့ ပြောခဲ့သူတွေဟာ ပညာရှင်အလိုတော်ရိတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီညီလာခံသတင်း = ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို စစ်တပ်ကဖွဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ ၁၉၉၃ စက်တင်္ဘာ (၁၅) ရက်နေ့ကစဖွဲ့တယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကို အသိအမှတ်ပြုတယ်။ စစ်တပ်ကနေ ပါတီဖက်ကိုပြောင်းလာမယ့် သူတွေကို ကြိုဆိုတယ်။ ပါတီဝင်ဦးရေ ၅ သန်း ၂ သိန်းလောက်ရှိ။ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေထဲက (၁ဝ) ယောက်မှာ (၁) ယောက်က ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင် ဖြစ်တယ်။
• NLD ကို ဒေါင့်အစုံကနေ ဝေဖန်ရေးတွေ လှိုင်ပေါလည်နေတာ တွေ့ရတယ်။
• ဝေဖန်ချက်တွေက ကြိုဆိုအပ်တာ နည်းနည်းနဲ့ မလိုတမာတွေကများတယ်။
• ကြံ့ခိုင်ရေးအလိုတော်ရိတွေသာမက ကြံခိုင်ရေးမဟုတ်သူတွေလည်းပါတယ်။ ငါကလွဲရင် ဘယ်သူမှမကောင်းဘူး သမားတွေလည်း ပါတယ်။
• ဝေဖန်ရေးသမားတွေကနေ ကြံ့ခိုင်ရေးကို သွယ်ဝှိုက်အားပေးရာကျတယ်။ ဝေဖန်သူတွေအတွက်အကျိုးရစေမှာတော့ တခုမှမမြင်ရပါ။
• NLD ကိုထိုးနှက်မှုကတော့ အတိုင်းအတာတခုထိ တာသွားလိမ့်မယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေး စားသွားမယ့်လမ်းကို ဦးတည်နေတယ်။ နည်းနည်းတော့ စောသေးတာပေါ့။
• NLD တွေ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးကြပါ။ အများပြည်သူကို အားကိုးကြပါ။ အစွမ်းအစပြကြပါ။
Sein Win အစကတော့ ရွှေချမ်းစည်ကျေးရွာဆိုတာ လူသိအင်မတန်နည်းခဲ့တယ်။ လူမှုကွန်ရက်က ရွှေချမ်းစည်ရဲ့ သောက်သုံးရေအခက်အခဲကို အဆက်မပြတ် တင်ပေးလိုက်တော့မှ စိတ်ဝင်တစားရှိလာကြတယ်။ အဖွဲ့အစည်း အတော်များများလည်း ရောက်ဖြစ်ကြတယ်။ မေ ၂၈ ရက်နေ့က မုံရွာမြို့ ဆူးလေကုန်းရပ် မေခလာဆေးခန်း ဆရာ ကိုဝင်းသူ၊ ဆရာမ မဖြူမြတ်ဆွေတို့က သားငယ်မောင်မြတ်သူရဝင်းရဲ့ (၇)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ရွှေချမ်းစည်ရွာမှာ လာရောက်ပြုလုပ်သွားခဲ့တယ်။ အိမ်ထောင်စု (၄ဝ) ကို ဆန်၊ ကြက်ဥနဲ့ မုန့်တွေပေးဝေလှူဒါန်းကြပါတယ်။
ကိုစိန်ဝင်း - ကုသိုလ်ပြုတဲ့မိသားစုနဲ့ ကွန်ရက်အဖွဲ့ကို ဂုဏ်ယူတယ်။
ကျွန်တော့်ညီအရင်းတယောက် မင်းကွန်းမှာ ရေနစ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ၁၉၇၁ လောက်ကပေါ့။ သူက Botany major တတိယနှစ်ကျောင်းသား။ ကျွန်တော်က ဆေးကျောင်းသား။ သူဆုံးကာစမှာ ကျွန်တော် ခေါင်းကိုရေလောင်းချိုးတိုင်း သူရေမွမ်းခဲ့မယ်လို့ ကိုယ်တိုင်ခံစားနေခဲ့ရဘူးတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း ရေတခွက်သောက်တိုင်း အဲလိုရွာကလူတွေကို သတိရနေကြမှာပေါ့ဗျာ။
ရေများ ကုသိုလ်လုပ်ပါတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ကို့ငယ်ငယ်က မုံရွာ-မန္တလေးရထားလမ်းမှာ အာလကပ္ပ၊ ချောင်းဦး၊ မြင်းမူ၊ ညောင်ပင်ဝန်းဘူတာတွေမှာ ရေရောင်းသူတွေက အော်ကြတဲ့အသံပါ။
Photo from Sein Win
မိုးတိမ်တွေ အလိပ်လိုက်အလိပ်လိုက် အခြေနေရာကနေ တက်လာနေတယ်။ မဲမှောင်လာပြီ။ တီဗွီကနေ မိုးလေဝသ ကြေညာချက် လာနေတယ်။ Thunder storm warning လို့သုံးတယ်။
ငယ်ငယ်တုံးက (မီးနင်း) ကျက်ရတုံးက Storm = မုန်တိုင်းလို့ အသေမှတ်ထားခဲ့ရတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မှန်က ပြင်းထန်တဲ့ ပတ်ဝန်ကျင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှု၊ ပြင်းတဲ့လေ၊ မိုးပါနိုင်တယ်၊ မိုးခြိမ်းသံပါမယ်၊ လျှပ်စီးလက်နိုင်တယ်၊ နှင်းကျတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါသတဲ့။ ဒီမှာ Storm ဆိုတိုင်းမကြောက်ရပါ။
အဲလိုပဲ မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရ၊ စစ်သား၊ ရဲ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ လူကြီးဆိုတိုင်း ကြောက်စရာပဲလို့ အသေမှတ်ခဲ့ရတာမျိုးတွေ ဒီမှာကပြောင်းပြန်။ မြန်မာပြည်သားတွေ ကြောက်စရာမဟုတ်တာမှန်သမျှ မကြောက်ကြရပါစေသတည်း။
• ၁၉-၇-၁၉၄၇ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုမှာ ဘညွန့်က ဖေါ်ကောင် ဖြစ်တယ်။
• ဒီပဲယင်း ကြည်ရွာမ၊ ၃ဝ-၅-၂ဝဝ၃ ညပိုင်းက လုပ်ကြံမှုကြီးအတွက် ဖေါ်ကောင်ထွက်ပေါ်လာပြီ။ ဒီပဲယင်း ကွန်မင်ဒါချုပ်ကြီးကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အကောင်အထည်ဖေါ်သူတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းနဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ အဲဒီအချိန်က နာမည်ဆိုးထွက်တဲ့ စစ်ထောက်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က သူ့စာအုပ်ထဲမှာ ဖေါ်ကောင်လုပ်ပြီးရေးလိုက်တယ်။ ဗခကခင်ညွန့်လည်း ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦကို ဒိုင်းနမိုင်းနဲ့ ခွဲတဲ့တရားခံကို ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနဲ့ ဦးအောင်ကြီးနဲ့တို့ တယောက်ကိုတယောက် လွှဲချနေသလိုပါပဲ။ စွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ရဲ့ ဂေါ့ဖါသား ဦးအောင်သောင်းနာမည်ကို ထိန်ချန်ထားပေးတယ်။
• ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမနဲ့ လက်ပတန်းဖြိုခွင်းမှုတွေရဲ့ ကွန်မင်ဒါချုပ်ကြီးဘယ်သူလည်း။ ဘယ်သူကနေ ဖေါ်ကောင် လုပ်မလည်း။
မေလ (၃ဝ) ရက်ဟာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင်း (ဒဗရင်း လို့ အသံထွက်ပါတယ်) အရေးအခင်းကြီး နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့် စာအုပ်ထဲမှာရေးသားချက်အရ ၂ဝဝ၃ မေလ ၃ဝ ရက် ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှု အဓိကတရားခံ သုံးယောက်လို့ပါတယ်။
(၂) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း (သေဆုံး)
ဇနီး = ဒေါက်တာတင်လင်းမြင့်
ရဲမြင့် (၂) ယောက်ရှိတယ်။ ဒီပဲယင်းရဲမြင့်ကို ရဲမြင့်ကြီးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဒီပဲယင်းဖြစ်တုန်းက ရဲမြင့်ကြီးက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ၉ ကစထမှူး (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး) ဖြစ်တယ်။ စရဖရဲမြင့် (ခ) ရဲမြင့်လေးက လက်ရှိ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ခွဲတဲ့တရားခံကို ဗခကနေဝင်းနဲ့ ဗမခအောင်ကြီးတို့က တယောက်အပေါ်တယောက် လွှဲချခဲ့ကြတယ်။ အလားတူပါပဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ရေးတော့ ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုမှာ မုံရွာ-ချောင်းဦးနားကနေ အမိန့်ပေးခဲ့တဲ့ စွမ်းအားရှင် (နောက်မှာ လက်ပတ်နီ) အဖွဲ့ကို မွေးထုတ်ခဲ့သူ ဦးအောင်သောင်း နာမည် ထည့်ထားတာမတွေ့ရပါ။
(Thaung Yin Nagar ကို ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်အကြောင်းဖြည့်ပြောပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
တတိယသား မနေ့က ဘုန်းကြီးကျောင်းက သူ့စာကြည့်တိုက်ကိုသွားတယ်။ ကျောင်းဝင်းထဲက ကသစ်ပင်ကြီးဆိုတာကနေ ကသစ်ရွက်နု လက်တဆုပ်စာလေးပဲရခဲ့တာကို မိဘတွေအတွက်ပေးခဲ့တယ်။
ဒီအပင်ကို ကသစ်ပင်လို့ပြောတာ သူတယောက်တည်းဆီကပဲ ကြားဖူးထားတယ်။ ဒေလီမှာရှိတဲ့ ကသစ်ပင်တွေက မတ်တတ်ရပ် ခူးကောင်းရုံပဲ။ အခုအပင်ကြီးက ဒီမှာပေါတဲ့ ဝက်သစ်ချပင်လိုအကြီးကြီး။
ညတုံးက အဲဒီအရွက်ကို ရေနွေးဖျောပြီး ငါးပိကျော်နဲ့တို့စားတယ်။ အန်တီကို ခဏနေအုံ့း့ ငါအရင်စမ်းမယ်ဆိုပြီး ဗော်လန်တီယာလုပ်တယ်။ အခုနေ့လည်အထိ ဘာမှမဖြစ်ပါ။ ကသစ် စစ်ပုံရတယ်။ အရွက်အရသာကတော့ ဒေလီတုံးက စားခဲ့ရတာထက် ခါးသက်တာပိုတယ်။
ကသစ်ပင်ကို ရုက္ခဗေဒအခေါ် Erythrina arborescens နဲ့ Erythrina suberosa လို့ဖတ်ရတယ်။ မြန်မာအဘိဓာန်မှာ ပင်လယ်ကစ်နဲ့ တောင်ကသစ်ရှိတယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ အိန္ဒိယမှာတွေခဲ့တာကို Himalayan Coral Tree လို့ခေါ်တယ်။ အဲတာမျိုးက ၅ မီတာအထိမြင့်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဓါတ်ပုံ = ၂၂-၁ဝ-၂ဝ၁၄ နေ့က ဆောင်းအဝင်မှာ တပင်လုံးဝါထိန်နေခဲ့တဲ့ အင်ဒီယာနပိုးလစ်၊ သရဏမဉ္ဇူဘုန်းကြီးက ကသစ်ပင်ကြီး
• လူဦးရေရဲ့ ၄% ဟာ သွေးလှူရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်။
• သွေးတခါလှူရင် လူနာ ၃ ယောက်အထိ ကူညီနိုင်တယ်။
• သွေးအကြိမ် ၁ဝဝ လှူတာဟာ သွေး ၄၇ လီတာနဲ့ညီတယ်။
• B (-) က ရှားတယ်။ လူဦးရေရဲ့ ၂% သာရှိတယ်။ဲ
• သွေးလှူသူထဲက ၅% ဟာ ပထမဆုံးလှူသူတွေဖြစ်တယ်။
• ၂ စက္ကန့်တိုင်းမှာ သွေးလှူရှင် ၁ ယောက်လိုအပ်တယ်။
• နေ့စဉ် သွေးလှူရှင်ပါင်း ၄၁ဝဝဝ လိုအပ်တယ်။
• တနှစ်မှာ သွေးနဲ့သွေးအစိတ်အပိုင်းပေါင်း သန်း ၃ဝ လိုအပ်တယ်။
• ပျမ်းမျှသွေးသွင်းမှုတကြိမ်မှာ ၃ သွေးပိုင့်ဖြစ်တယ်။ (၁ ပိုင့် = ဝ့၄၇ လီတာ)
• အများဆုံးသွေးလှူဘို့တောင်းခံတဲ့သွေးအမျိုးအစားက (အို) ဖြစ်တယ်။
• (ဆစ်ကယ်ဆဲလ်) သွေးရောဂါသည်ပေါင်း ၇ဝဝဝဝ ရှိတယ်။ တနှစ်မှာ အဲဒီရောဂါနဲ့ ကလေးပေါင်း ၁ဝဝဝ မွေးလာကြတယ်။ သူတို့အားလုံးကို သွေးမကြာမကြာသွင်းပေးရတယ်။
• ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ကင်ဆာလူနာ ၁့၆ သန်းရှိတယ်။ သူတို့ထဲက အများစုကို (ခီမို) ပေးနေတုံးမှာ သွေးသွင်းကုသခဲ့ရတယ်။
• ကားမတော်တဆမှုတခုမှာ သွေးပျမ်းမျှ ၁ဝဝ ပိုင့်လိုတယ်။
ဓါတ်ပုံ = တမူးမြို့ လူငယ်ကွန်ရက်သွေးလှူအသင်းကစီစဉ်တဲ့ စုပေါင်းသွေးလှူခြင်း
Photo from Yin Ko Oo
Pentagon says live anthrax inadvertently shipped across US
ဒေါင့်သန်းရောဂါပိုးအရှင်တွေကို မထင်မှတ်ပဲ နေရာရွေ့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန် စစ်ဌာနချုပ် ပင်တာဂွန်က ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။
ပြည်နယ် ၉ ခုမှာ အဲလိုမတော်တဆဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အများလူထုကိုတော့ သိထားတဲ့အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ ပင်တာဂွန် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီး Steve Warren (စတိဖ်ဝါရင်း) ကပြောပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ ထိကိုင်ခဲ့ရသူ ဓါတ်ခွဲခန်းအမှုထမ်းလေးယောက်ကို ဆေးဝါးကုသပေးနေပါတယ်။ Utah အူတာမှာရှိတဲ့ Dugway Proving Ground မှာ ပုံမှန်သုတေသနလုပ်ဘို့ သိမ်းဆီးထားတဲ့ ဒေါင့်သန်းရောဂါပိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်က သေပြီးသား ပိုးတွေကိုသာ အဲလိုပို့ဆောင်ဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ AG-1 လို့ခေါ်ပါတယ်။
ပိုးမွှားလက်နက်အနေနဲ့လည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမကမ္ဘာစစ်ကတည်းက ဂျာမန်တွေကစသုံးခဲ့ပါတယ်။ Anthrax spores ဒေါင့်သန် (စပိုး) ကိုအများအပြားထုတ်သုံးခဲ့တာကတော့ ဂျပန်ကနေ ၁၉၃၂-၁၉၄၅ တရုပ်ပြည်ကို သိမ်းခဲ့တုံးက ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ နှစ်ဖက်လုံးက စမ်းသပ်မှုသာလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပင်လယ်ကွေ့စစ်တုံးက အီရတ်ဟာ အမေရိကားကနေ အဲဒီပိုးမွှားလက်နက်ရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့သေးတယ်။
ဒေါင့်သန်းရောဂါဆိုတာ နွားတွေမှာဖြစ်တဲ့ကူးစက်မြန်ရောဂါဖြစ်တယ်။ ပိုးရှိနေတဲ့ နွား၊ အမဲသားကို ထိကိုင်မိတဲ့လူကို ကူးစက်စေပြီး သေစေနိုင်တယ်။
Anthrax ဒေါင့်သန်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/anthrax.html
ပုံ = လူမှာဒေါင့်သန်းရောဂါကူးစက်ရင်ဖြစ်တဲ့အနာ
(အီးယူ) နိုင်ငံတွေမှာ ကေဖင်းဓါတ်များခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်သတိပေးချက်ကို ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
သူတို့ဆီမှာ Espressos (အိတ်စပရက်ဆို) ကော်ဖီက နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ (ယူအက်စ်) မှာ လူကြိုက်အများဆုံးက Starbucks (စတားဘာ့ခ်) ဖြစ်တယ်။
တနေ့ ၅ ခွက်ထက်ပိုရင် နှလုံးရောဂါ၊ အိပ်မပျော်တာနဲ့ စိတ်ဆောက်တည်ရမရဖြစ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ အင်နာဂျီအရည်။ အချိုရည်တွေနဲ့ ချောကလက်ထဲမှာ ကေဖင်းပါတယ်။ ဒိန်းမတ်မှာ လူ ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်၊ နယ်သာလန်မှာ ၁၇% နဲ့ ဂျာမဏီမှာ ၁၄% တိုဟာ အဲဒီအကန့်အသတ်ထက် ပိုသောက်သုံးနေကြတယ်။
• Cup of filter coffee - 90mg
• Standard energy drink - 80mg
• Espresso - 80mg
• Cup of tea - 50mg
• Can of cola - 40mg
• Bar of dark chocolate - 25mg
• Bar of milk chocolate - 10mg
လက်ရှိမှာ လူအတော်များများက စိတ်ချရတဲ့ပမာဏထက်ပိုကဲပြီးသောက်သုံးနေကြတယ်။ စိတ်ချရတဲ့ပမာဏဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ ကလေးတွေမှာ နည်းတယ်။ လူကြီးဆိုရင် တနေ့မှာ 400mg ထက်မပိုရပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆိုရင် 200mg ထက်မပိုရပါ။ ကလေးတွေဆိုရင် 3mg per kg သာ ဖြစ်သင့်တယ်။
1. Caffeinated drinks (ကေဖင်း) ပါတဲ့ (အင်နာဂျီ) သောက်စရာတွေ
2. Caffeine ကေဖင်း
3. Caffeine and Pregnancy ကေဖင်းနဲ့ကိုယ်ဝန်
4. Caffeine in Tea leaves ကေဖင်း နဲ့ လက်ဖက်
5. Coffee and Health ကော်ဖီ နဲ့ ကျန်းမာရေး
(၁) Lalrinthari Mizo = ၄ လ တကြိမ် ဗပိာုသွေးဘဏ်ကိုလှူပါတယ်။ ကုသိုလ်ယူခြင်းတမျိုး အများအကျိုး ဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ ခံယူထားလို့ ပိတိဖြစ်ရပါတယ်။ လှူဒါန်းနိုင်အောင် ကျန်းမာလို့လည်း ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်သလို ဝမ်းသာတယ်။ ကြုံတုန်း ဆရာ့ကိုဝင်ကြွားတာ။ (သူက ကျွန်တော့် တပည့်သူနာပြုဆရာမ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင် ဖြစ်ပါတယ်။)
ဆရာတပည့်ချင်း ကြွားကြတာပေါ့။ ဆရာ မြို့သာမှာ တိုက်နယ်ဆရာဝန်လုပ်ခဲ့တုံးကပေါ့။ ကိုယ်ခွဲပေးမယ့်လူနာကို ကိုယ့်သွေးဖေါက်လှူ သွင်းပေးရင်းနဲ့ ခွဲပေးခဲ့တာ အနည်းဆုံး ၃-၄ ယောက်ရှိမယ်။
(၂) မဟော်သဓာ တီကောင် = ဒီလိုကြားရတော့ လေးစားအားကျရပါတယ်ဆရာရေ။ ဇီဝကထက်မလျော့တဲ့ ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကို မလွဲမသွေခံယူရဦးမှာပါပဲလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကနေ့နေ့လည်စာစားနေရင်း တွေးနေတာတခုနဲ့ (ကွန်မင့်) နဲ့က တိုက်ဆိုင်နေတယ်။ တနေ့ကလည်း ဆုကြီးပန်လို့ ရေးတာလည်းဖတ်ရတယ်။ ကျွန်တော်က တတ်နိုင်တာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပါတယ်။ အခမဲ့ဆေးကုပေးတာ၊ မေးတာကိုဖြေတာ စသဖြင့်။ များပြားကြီးမားလှတယ်မဟုတ်ပါ။ ဆုကြီးပန်ဆိုတာမျိုး တခါမှစိတ်ကူးထဲမရှိပါ။
ဇီဝကလိုတော့ဖြစ်ချင်မိတယ်။ ဘုရားကိုဆေးကုပေးနိုင်တဲ့ ဇီဝကမျိုးမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်လူနာရဲ့ရောဂါဝေဒနာဟာ မပျောက်ကင်းနိုင်မှန်းသိတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒသာဖြစ်ပါတယ်။ ကုသပေးရသူတိုင်းရဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ သမားတော်မျိုးသာဖြစ်ချင်တာပါ။ ပါရမီတွေ မရေမတွက်ဖြည့်ရမှာလည်းသိပါတယ်။ ကောင်းတာတခုခုလုပ်ပြီး ဘာဖြစ်ရပါလို၏လို့ ဆုတောင်းတဲ့အလေ့ကတော့ မရှိသလောက်ပါ။
(၃) Tun Pale Monday 6:36am = ပုလဲမြို့၊ ပါရမီရပ်က ဆရာ့အိမ်ဝင်း အနောက်တောင်ထောင့်မှာရှိတဲ့ သရက်ပင်ဗျ။
ရာဇဂြိုလ်မြုိ့အနားက ဆရာဇီဝကလှူဒါန်းထားတဲ့ သရက်ဥယျာဉ်မှာ မြတ်စွာဘုရားဟာ အဇာတသတ်မင်းကို သာမညဖလ သုတ္တန်ဒေသနာတော်ကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ သတိထားမိတာတခု ပြောပါရစေ။ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာချိန်မှာ ဘာတွေ ထူးလာသလည်း။ သုတေသနဆန်းစစ်မှုတော့ မလုပ်အားပါ။ တန်းမြင်နေတာကို ပြောချင်ပါတယ်။
အာဏာယူပါတီကြီးနဲ့ အားခဲပြီး ထပ်တလည်းနွှဲအုံးမယ့် NLD ပါတီတွေအပေါ် မီဒီယာကနေ ဘယ်လိုရေးနေ ပြောနေ ဝေဖန် ပြစ်တင်နေကြသလည်း။
အစိုးရနဲ့ ပြည်ခိုင်းဖြိုးကို ပြောရတာမောသွားကြလို့လား၊ ပြောလည်းထူးမှာမဟုတ်လို့ မပြောချင်ကြတော့တာလား မသိပါ၊ ပိုပြီးဝေဖန်ကြတာ မတွေ့ပါ။ မဲရရေပေါ်လစီတွေ၊ လေချိုသွေးတာတွေ ရှိလာလို့ ခြုံလိုက်ရင် ပြည်ခိုင်းဖြိုးရဲ့ အကွက်ထဲ တန်းဝင်နေကြသူမနည်းတာ လေ့လာလို့ရတယ်။
NLD ကိုကြတော့ ပြောင်းပြန်။ ဒေါ်စုဆိုတာနဲ့ ဘာမှလာပြောမနေနဲ့ ချစ်ခင်လေးစား အားထားပြီးသူတွေက ရှိပြီးသားက လုံးဝမပြောင်းကြပါ။ တမျိုးတိုးလာတာက ဝေဖန်ရေးလုပ်သူတွေက ပိုပြီးခပ်နာနာဝေဖန်လာကြတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ဝေဖန်ရေးကို ထောက်ခံ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကာလဒေသကြည့်သင့်ကြတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဝေဖန်ချက်ဟာ မှားတယ်လို့ ငြင်းချက်ထုတ်တာမဟုတ်သလို မှန်တယ်လို့ပြောနေတာ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁-၂ နှစ်လောက်က ဝေဖန်ချက်ကို ကနေ့ စကားလုံးမရွေးပဲ ထပ်တင်တာမျိုးဖြစ်အုံးတော့ သက်ရောက်မှု ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
နိုင်ငံရေးမှာ ပေါ်ပင်တွေကနေဖြစ်ဖြစ်၊ သဘာရင့်တွေကနေဖြစ်ဖြစ် အဲလိုလုပ်လာရင် နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ အော့့် သူတို့လည်း ဟိုဖက်မှာ မပါရင်တောင်မှ ဟိုဖက်ကို မေ့ထားကြတာပဲလားလို့ ကောက်ချက်ချမိပါတော့တယ်။
အာဏာရအစိုးရပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တပန်းသာတယ်ဆိုတာထက်ပိုကဲပြီး၊ အဲလိုလူတွေရှိနေတာဟာ အာဏာယူပါတီ ကံကောင်းစေရာကျတယ်လို့ အားနာခြင်း အလျဉ်းမရှိ ဝေဖန်လိုက်ပါကြောင်း။
G6PD အကြောင်း စာ ၃ ပုဒ်တင်ထားပါတယ်။ တချို့က (အေ-ဘီ-အို-အေဘီ) သွေးအုပ်စုနဲ့ G6PD ဆက်စပ်နေတာကို ပြောလာကြတယ်။ မမှန်ပါ။
(၁) (က) ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ လက်ပရိုစီခေါ် အနာကြီးရောဂါသည်တွေမှာ ABO သွေးအုပ်၊ G6PD မွေးရာပါရောဂါနဲ့ မူမမှန်တဲ့ ဟီမိုဂလိုဘင်တွေ ဆက်စပ်မှုကို လေ့လာမှုလုပ်ခဲ့တယ်။ (ခ) မလေးရှားနိုင်ငံက G6PD မွေးစကလေး တရုပ်၊ မလေးနဲ့ အိန္ဒိယ ၁ဝ၄၁ ယောက်ကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ရလဒ်ကတော့ (က) အနာကြီးရောဂါသည်တွေထဲမှာ သွေးအုပ်စုနဲ့ G6PD ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ (ခ) တခြားလူတွေကြားမှာလည်း သွေးအုပ်စုနဲ့ G6PD ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
(၂) G6PD မရှိတဲ့ တရုပ်ကလေး ၁၁၈၁ ယောက်နဲ့ မလေးကလေး ၅၃၅ ယောက်အပြင် Rh အပေါင်း-အနုတ်ကို G6PD တရုပ်မွေးစကလေး ၂၄၈ ယောက်နဲ့ G6PD မရှိတဲ့ကလေး ၂၅၅ ယောက်ကို လေ့လာခဲ့တယ်။
ရလဒ်ကတော့ ABO သွေးအုပ်စုနဲ့ G6PD ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ Rh မှာတော့ ထူးခြားချက်ရှိပေမယ့် ဆေးပညာအရသာ အရေးပါတယ်။
ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ g6pd deficiency တွေအတွက် supporting group လေးတခုရှိရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
ဟုတ်တယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အသင်းတွေဖွဲ့ထားကြတယ်။ အွန်လိုင်းနဲ့လည်းလုပ်ကြတယ်။ စုဝေးတာလည်းလုပ်တယ်။ ပညာပေးလည်းလုပ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ရှိစေချင်တယ်။ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကနေ ဦးစီးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်။ ဆရာက ရိုးရိုးဆရာဝန်မို့ သိပ်မသင့်ပါ။ မိခင်ကလေးအဖွှဲစည်းတွေက နိုင်ငံရေးမပါ စေတနာနဲ့လုပ်ရင်လည်းကောင်းမှာပဲ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မကတော့ supporting group လေးအရမ်းဖြစ်စေချင်တယ်။ website ထောင်ရအောင်လည်း ကျွန်မရဲ့ IT knowledge က very poor အဲဒီအထူးကုများကလည်း သိပ်ပြီး g6pd deficiency ကို serious ဖြစ်ပုံမပြကြဘူး။
ဆရာတတ်နိုင်တာလုပ်ပေးပါမယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအရာတခုခုကို အာရုံစိုက်လုပ်နိုင်သူမျိုးကနေ ကမကထ လုပ်သင့်တယ်။ ဆရာက ဘုန်းကြီးကျောင်း ဟင်းပေါင်းလိုဆိုတော့ သန့်သန့်လေးကပိုကောင်းမယ်။
1. G6PD Community Support Group Facebook https://www.facebook.com/G6PDCommunitySupportGroup
2. G6PD Deficiency Support Group http://www.dailystrength.org/c/G6PD-Deficiency/support-group
3. G6PD Deficiency Support Group http://www.mdjunction.com/g6pd-deficiency
4. New Yahoo Support Group - G6PD Deficiency and Favism http://g6pddeficiency.org/wp/2013/08/08/new-yahoo-support-group/
ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော့်သမီးလေးက 22-4-2015 မှာမွေးပါတယ်။ ကလေးက G6PD ဖြစ်နေတယ်ပြောပါတယ်။ ဆရာ့ ဆောင်းပါးဖတ်ကြည့်ထားလို့ paracetamol နဲ့မတည့်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကနယ်မှာနေတော့ ကလေး နေမကောင်းဖြစ်ရင် ရန်ကုန်မလာခင် ဘာဆေးတိုက်ထားရမလဲလို့ ကလေးအထူးကုကိုမေးတော့ paracetamol အရည်တိုက်ဖို့ပြောပါတယ်။ G6PD ကလေးမို့တိုက်လို့ရပါ့မလားမေးတော့ အဲဒါမတိုက်ရင် ဘာတိုက်ရမလဲလို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ ဘာဆေးများသင့်တော်မလဲဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
သမီးလေးနဖူးနဲ့ မျက်ခွံမှာလည်း အနီကွက်တွေပါလာတာ ရောဂါနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိပါသလားဆရာ။
Low-risk Drugs for G6PD Deficients ဒီဆေးစာရင်းဟာ အန္တရာယ်နည်းနည်းသာရှိတဲ့ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက လိုအပ်ချက်ကပိုရင် ဆေးအဆနဲ့အညီသုံးနိုင်တယ်။
1. Acetaminophen (paracetamol, Tylenol, Tralgon, hydroxyacetanilide) ပါရာစီတမော။
2. Acetophenetidin (phenacetin) အနာအကိုက်သက်သာဆေး။
3. Aminopyrine (Pyramidon, amidopyrine) အဖျား-အနာသက်သာဆေး။
4. Antazoline (Antistine) နှလုံးခုန်မမှန်သူတွေကိုပေးတဲ့ဆေး။
5. Antipyrine အနာ-အရောင်သက်သာဆေး။
6. Ascorbic acid (vitamin C) ဗီတာမင် (စီ)
7. Benzhexol (Artane) ပါကင်ဆန်ရောဂါဆေး။
8. Chlorguanidine (Proguanil, Paludrine)
9. Chloroquine ငှက်ဖျားဆေး။
10. Colchicine အနာ-အရောင်သက်သာဆေး။
11. Diphenhydramine (Benadryl) ဘာမီတွန်လိုဆေး။
12. Isoniazid တီဘီဆေး။
13. Menadione sodium bisulfite (Hykinone)
14. Phenylbutazone အနာသက်သာဆေး။
15. Phenytoin တက်သက်သာဆေး။
16. Probenecid (Benemid) ဂေါရောဂါဆေး။
17. Procain amide hydrochlonde (Pronestyl)
18. Pyrimethamine (Daraprim) ငှက်ဖျားဆေး။
19. Quinidine နှလုံးရောဂါဆေး။
20. Quinine ငှက်ဖျားဆေး။
21. Streptomycin တီဘီထိုးဆေး။
22. Sulfacytine ဆာလ်ဖါဆေး။
23. Sulfadiazine ဆာလ်ဖါဆေး။
24. Sulfaguanidine ဆာလ်ဖါဆေး။
25. Sulfamerazine ဆာလ်ဖါဆေး။
26. Sulfamethoxypyridazine (Kynex) ဆာလ်ဖါဆေး။
27. Sulfisoxazole (Gantrisin) ဆာလ်ဖါဆေး။
28. Trimethoprim ဆက်ပတွန်မှာပါတဲ့ဆေး။
29. Tripelennamine (pyribenzamine) အင်တီဟစ်တမင်းဆေး။
30. Vitamin K ဗီတာမင် (ကေ)။
မွေးရာပါ အနီ-ပန်းရောင်ကွက်ပါတာ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ နည်းနည်းကြီးလာရင် ပျောက်ပါမယ်။ ဘာဆေးမှ မလိမ်းသင့်ပါ။
• ပို့စ်ခေါင်းစဉ်သာဖတ်ပြီး စာမဖတ်ပဲ မမေးပါနဲ့။
• ကွန်မင့်မှာ အရုပ်တွေ၊ အီမိုးရှင်းတွေ၊ သူများလုပ်ထားတာတွေကို လာမတင်ပါနဲ့။
• ကိုယ်ပိုင်ဆေးနည်းတွေ လာမပေးပါနဲ့။
• မေးထားပြီးရင် ဖြေထားတာကို လာဖတ်ပါ။
• Add လုပ်မရတော့ပါ။ Friend မဟုတ်သူတွေလည်း Page မက်ဆေ့ခ်ျကနေ မေးနိုင်ပါတယ်။ ဖရင်းမဟုတ်ရင် Chat ကနေ မေးမရနိုင်ပါ။
• (ကွန်မင့်) မှာ မမေးသင့်ပါ။ တခြားလူတွေကို အားနာရတယ်။ စာရှည်လည်းဖြေမရပါ။
• မေးခွန်းစည်းကမ်းအရသာမေးပါ။ (၁) doctortintswe@gmail.com အီးမေးလ်။ (၂) မက်ဆေ့ခ်ျ။ (၃) ချတ်။
• အဲဒီနေရာတွေမှာ အားသလား၊ မေးလို့ရလားရေးမနေပဲ၊ မေးခွန်းသာရေးလိုက်ပါ။ အဖြေမလာသေးရင် သတိပေးပါ။
• ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ ကျား-မ နဲ့ အသက်ကို အရင်ဆုံးရေးပါ။ ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီ၊ လိုအပ်ရင် ရာသီ၊ အိမ်ထောင်၊ ကလေး။ နေတဲ့တိုင်းပြည်။ ဒါပေမယ့် လူနာမည်နဲ့ နေရပ်လိပ်စာအတိအကျ ကိစ္စမရှိပါ။
• ဓါတ်မှန်၊ အာလ်ထွာဆောင်း၊ ဆေးစစ်ချက်တွေကိုပို့ရင် အတည့်ပို့ပါ။ ပုံအစောင်းတွေမပို့နဲ့။ လိုတာသာပို့ပါ။
• မက်ဆေ့ခ်ျကနေမေးရင် စာတကြောင်းကို မက်ဆေ့ခ်ျတခုလိုမရေးပဲ မေးခွန်းတခုလုံးသာရေးပါ။
• SMS အရေးအသားမျိုးကို မဖတ်တတ်ပါ။ မြန်မာစကားကို အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ရေးတာကို မဖတ်ပါ။
• စာတွေကို Space အဖြတ်အခြားမပါပဲရိုက်ရင် ဖတ်မရပါ။
• ဖုန်းဆက်ပြီးမေးရင် အချိန်ဇုန်မတူတာရော၊ အသံထွက်လွဲနိုင်တာရောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။
• ကျား-မ၊ အသက်၊ ကျန်းမာရေးနောက်ခံ စတာတွေမပြောလိုရင်လည်း ဘလော့ခ်မှာ ရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
• ကျွန်တော့စာတွေကို ဒီနေရာတွေမှာ ရှာနိုင်ပါတယ်။- http://doctortintswe.blogspot.com/ Dr. Tint Swe's Writings
- https://doctortintswe.wordpress.com/ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ဆေးပညာနှင့် အခြားစာများ
- https://www.facebook.com/pages/Dr-Tint-Swe/ ဖေ့စ်ဘွတ်
မနက်ကအရက်၊ ညမှာစိတ်ကြွဆေး မေးကြတယ်။ ရေးထားပါတယ်။
Aung Lin ခုအခါက အရက်ထက်ဆိုးတဲ့ ရာမဆေးတွေ ခေတ်စားနေသောကြောင့် WY ဆေးအကြောင်းသိချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် Blog ထဲမှာ ရေးထားပြီးစာတွေရှိပါတယ်။ http://doctortintswe.blogspot.com/
1. Amphetamines (1) ယာဘ-ရာဘ-ရာမ-ယာမ
2. Amphetamines စိတ်ကြွဆေး
3. Drugs and politics ဆေးတန်ခိုးနဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်နိုင်တယ်
4. Ecstasy Drug Tests စိတ်ကြွဆေး ဆေးစစ်ခြင်း
5. Ecstasy စိတ်ကြွဆေးများ
6. High မူးယစ်ဆေးများ
7. Military and Crystal Meth စစ်တပ်နဲ့ စိတ်ကြွဆေး
8. Molly လူငယ်တွေ သုံးနေကြတဲ့ စိတ်ကြွဆေး မော်လီဆေးပြား ပိုဆိုးဝါး
9. Pseudoephedrine (ယာဘ) ကို ဒါကနေလုပ်တယ်
10. Yabba (ယာဘ)
Photo: Just the girl on the Yaba. Ya means medicine and Ba means crazy. This method is commonly known as chasing the dragon.
ပို့စ် = Kyaw Ngwe ၂၅.၅.၁၅ နေပြည်တော်သို့ နေ့ခြင်းပြန် ကားစီးနေမိခြင်း
- နေပြည်တော်ရောက် တောသံဖျောက်။
- ပြည်ပရောက် လွှတ်တော်စကားမပေါက်။
- ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတော့ စာတွေရေး။
- အနေဝေး ကျွန်တော်တော့ ၂ဝ၁ဝ အမတ်မင်းများလို မယဉ်ကျေး။
(သူက ရေစကြို NLD က မိတ်ဆွေဆရာဝန်ပါ။)
မေလ နောက်ဆုံး တနင်္လာနေ့ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတခုလုံး ဖက်ဒရယ်အစိုးရနဲ့ဆိုင်သမျှ ကျောင်းတွေ ရုံးတွေ၊ ဘဏ်တွေ အကုန်ပိတ်တယ်။ ဖွင့်တဲ့အလုပ်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ရသူတွေက အခငွေပိုရကြတယ်။ ဒီနှစ် မေလ (၂၉) ရက်နေ့မှာကျရောက်တယ်။
စစ်ပွဲတွေမှာကျဆုံးသွားသူတွေကို သတိတရအောက်မေ့ရတဲ့နေ့ထူးဖြစ်တယ်။ အစတုံးကတော့ ၁၈၆၈ ခုနှစ် အမေရိကန် ပြည်တွင်းစစ်မှာ ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ စစ်သည်တော်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ Decoration Day ခေါ်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့မှာ အထိမ်းအမှတ်နေရာတွေ၊ စစ်သင်္ချိုင်းတွေကို သွားလည်ကြတယ်။ အုတ်ဂူတိုင်းမှာ အမေရိကန်အလံလေးတွေ စိုက်ကြတယ်။
တနေ့က ဒေါ်မြမြအေး အပြင်ထွက်ရင်း သူများတွေပြောနေကြတဲ့အသံ ကြားခဲ့တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံနေ လာနေသူတွေပေါ့။ နက်ဖြန် မင်မိုရီရယ်ဒေးတဲ့။ မင်မိုရီဆိုတာ မှတ်ဉာဏ်တဲ့။ ရီတော့ရီရပေမယ့် ကိုယ်ငယ်ငယ်တုံးကလည်း သည်လောက်ပဲ သိခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ နေ့တိုင်းဟာ မင်မိုရီရယ်ဒေးပဲ။ မြန်မာပြည်ကိုပဲ သတိရနေတယ်။
May 24th, 11:33am
ဆရာရှင့် ကျွန်မငယ်ငယ်ကအကြောင်းလေးပြောပြပါရစေရှင့်။ အသက် ၄ နှစ် သူငယ်တန်းတက်ခါနီး နွေရာသီလောက်မှာ မိဘတွေက ကျူရှင်ထားပါတယ်။ ညနေ ၄ နာရီဆိုရင်ကျူရှင်သွားရပါတယ်။ ဒီနားဝန်းကျင်မှာတော့ အဲ့ကျူရှင်ဆရာမက အကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးလို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ အရိုက်ကြမ်းတယ်လို့လဲ ကြားပါတယ်။ အရိုက်ကြမ်းတယ်လို့ ကြားကထဲက ဆရာမကိုအရမ်းကြောက်မိပါတယ်။ မမြင်ဖူးသေးပါဘူး။ ကျူရှင်က သူ့အိမ်မှာ သွားတက်ရပါတယ်။ ဆရာမမျက်နှာကိုမြင်ရတော့ ပိုကြောက်မိပါတယ်။ ကျူရှင်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူ အတန်းမျိုးစုံတွေ့ရပါတယ်။ တူတူထိုင်နေပေမဲ့ အတန်းမတူကြပါဘူး။ သူငယ်တန်းက ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲပါ။ ဆရာမကို ကြောက်လို့ ရေးခိုင်းတာတွေကို သေချာရေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆရာမက တခြားကျောင်းသားတွေကို စာတစ်လုံးမှားတာနဲ့ ထစ်တာနဲ့ ကြိမ်လုံးကြီးနဲ့ရိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဆရာမ ဆူပူကြိမ်းမောင်းပြီး ရိုက်နှက်နေတာကို နေတိုင်းမြင်နေရတော့ တနေ့ထက်တနေ့ ပိုပိုကြောက်လာမိပါတယ်။
နောက်ပိုင်းကျတော့ ညနေ ၃ နာရီထိ တနေ့လုံးအကောင်းပါ။ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆော့ကစားပါတယ်။ ညနေ ၃ နာရီ နာရီကို ကြည့်မိတာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ မပျော်ရွှင်တော့ပါဘူး။ မကစားတော့ပါဘူး။ ၄ နာရီထိုးမှာကြောက်နေမိပါတယ်။ ချောင်တစ်ချောင် ထောင့်တစ်ထောင့်မှာ ကပ်နေပြီး မျက်စိပျက် မျက်နှာပျက်နှင့် ကျူရှင်သွားရမှာကို အင်မတန် စိုးရိမ် ကြောက်လန့်နေမိပါတယ်။ ၄ နာရီထိုးခါနီးတော့ လူကြီးတွေက လွယ်အိတ်လွယ် ကျူရှင်သွားတော့လို့ ပြောပါတယ်။ ၄ နာရီထိုးခါနီးလေ ပိုကြောက်လေပါဆရာ။ ကျူရှင်သွားဖို့ကိုလည်း ဝေ့လည်ချောင်ပတ်လုပ်နေမိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဖျားသလိုလို ဘာလိုလိုတွေဖြစ်နေသလိုနဲ့ မျက်နှာလဲမကောင်းတော့ အိမ်က နေမကောင်းရင်လဲ ဒီနေ့ ကျူရှင်မသွားနဲ့တော့လို့ ပြောလိုက်ရင် အရမ်းပျော်ပါတယ်။ ၄ နာရီကျော်သွားရင် ပုံမှန်အတိုင်းစိတ်က ပြန်ပြီး ပျော်ရွှင်လာပါတယ်။ ကစားချင်စိတ် ဖြစ်လာပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ကျူရှင်ချိန်ကျော်သွားလို့ မသွားရတော့ရင်လဲ မပျော်တော့ပါဘူး။ မိဘတွေဆူမှာကို စိုးရိမ်နေမိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ၃ နာရီဆိုရင် နာရီကိုတစ်ကြည့်ကြည့်နဲ့ လက်မထိပ်တွေ နှုတ်ခမ်းတွေ ယားပြီး အဖုတွေ ထလာပါတယ်။ နောက် မျက်နှာတစ်ပြက်လုံး လက်ခြေထောက် ခန္ဒာကိုယ် အနှံ့အပြားမှာ မနေတတ်လောက်အောင်ကို ယားပြီး အဖုအပိန့် အင်ပြင်လိုမျိုး ပြင်လိုက် အချပ်လိုက်ကြီးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဖုတွေထတော့ ကျူရှင် မသွားရတော့ပါဘူး။ ဖေကြီးပြန်လာတော့ မက်ဇင်ကယ်ဆိုတဲ့ဆေးရည်တစ်မျိုး လိမ်းပေးပါတယ်။ သက်သာတဲ့အခါလဲ ရှိသလို ညနေထဲက အဖုထတာ နောက်မနက်ထိ မပျောက်တဲ့အခါလဲရှိပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းတွေဆို အဖုကြီးကြီးတွေကြောက် ထော်လန်ဖူးရောင်နေပါတယ်။ ပါး၊ မျက်ခုံး၊ လည်ပင်း၊ လက်၊ ပေါင်မှာလဲ အဖုအပိန့်များစွာနဲ့ပါ။ အမြဲကုတ်နေရပါတယ်။
ဆေးရုံပြပေးပါတယ်။ ဆေးရုံကလဲ နားမလည်လို့ မင်္ဂလာဒုံစစ်ဆေးရုံကြီးကို သွားခိုင်းပါတယ်။ ဟိုရောက်တော့ ဆရာဝန်မကြီးကို ဖြစ်စဉ်တွေပြောပြပါတယ်။ ဆရာဝန်မက ဘယ်အချိန်ဆို ဖြစ်တတ်လဲမေးတယ်။ ၃ နာရီဆို ယားပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း အဖုပိန့်တွေထလာလို့ ၄ နာရီ ကျူရှင်ကို အမြဲပြတ်နေရတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ ဆရာဝန်မက ကလေးကို ကျူရှင်ကထုတ်လိုက်ပါလို့ ပြောပါတယ်။ ဆေးတစ်မျိုးလဲ ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ အင်ဖတ်နဲ့ ရေချိုးပေးဖို့ပြောပါတယ်။ အိမ်ကလဲ ကျူရှင်ကို မတက်ခိုင်းတော့တဲ့အတွက် တေိာတော်လေးကို စိတိချမ်းသာမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆရာမကို အိမ်မှာလာသင်ဖို့ သီးသန့် ငှားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မလဲ သဘောတူလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အိမ်မှာသင်ရင် လူကြီးတွေရှိနေလို့ မရိုက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကြိမ်လုံးကြီးလဲ မပါလာတော့လို့ပါရှင့်။ ဒါပေမဲ့ စာစသင်တော့ နဲနဲတော့ ကြောက်နေမိပါတယ်။ အရင်လို အဖုတွေတော့ မထတော့ပါဘူး။ ကြိမ်လုံးမရှိတော့ပေမဲ့ ပေတံစောင်းနဲ့တော့ လက်ဆစ်တွေအခေါက်ခံရပါတယ်။ ဆေးလဲ ပုံမှန်သောက်နေတဲ့တွက် ဆရာမကို ကြောက်တဲ့စိတ် မရှိတော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း နေထိုင်လာတဲ့ တစ်လျှောက်မှာတော့ မိဘတွေကိစ္စ ကျောင်းကိစ္စ သူကယ်ငယ်ချင်းတွေကြောင့် စိတ်ထိခိုက် စိတ်ညှိုးနွမ်းခဲ့ရင်တော့ သွေးယားပြီး နှုတ်ခမ်းက စပြီး အဖုတွေ အမြဲပြန်ထလာပါတယ်။ ကျွန်မ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင် စိတ်ဆင်းရဲရင် ဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူး။ အဖုတွေထလာပါတယ်။ ဒါဆို အိမ်ကလဲချက်ချင်းသိပြီး ဆေးသောက် ဆေးလိမ်းနဲ့ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပေးပါတယ်။ တခါတလေ ကျောင်းမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးခါနီး စာမရခဲ့ရင် အမှတ်နည်းခဲ့ရင် အဆင့်ကျရင် သူငယ်ချင်းတွေကမခေါ်ရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး အဖုထလာပါတယ် ကျောင်းမှာဆိုတော့ ရှက်စရာကြီးပါ။ နှုတ်ခမ်းကြီးထော်လာတာ။ အရမ်းရှက်လို့ ကျောင်းမှာဆို သတိထားပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကို ပျော်ရွှင်အောင်ထားပါတယ်။ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ရဲပါဘူး။ ဆေးကိုလဲနေ့တိုင်းသောက်ပါတယ်။ ၁ဝ တန်း အောင်ပြီးတဲ့ထိ။ ဆေးနာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ တက္ကသိုလ် Frist year ရောက်မှ ဖြတ်လိုက်တာပါ။ နောက်ပိုင်း တော်တော်လေး စိတ်ထိခိုက်မှ ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်တွေထိရင်လဲ ယားတယ် အဖုထပါတယ်။
ခု အိမ်ထောင်ကျတော့ ယောက်ကျားနဲ့ရန်ဖြစ်ရင်း ယောက်ကျားက ချောင်ပိတ်ပြီး အပေါ်ကနေ လက်ကိုချုပ်ပြီး ပါးတွေ ခေါင်းတွေ လှိမ့်ရိုက်ပါတယ်။ ရိုက်တော့ အော်မိတော့ သူ့အမေ (ယောက္ခမ) က အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာပြီး ကျွန်မကို မကြားဝံ့မနာသာတွေ ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ဆဲပါတယ်။ သူ့သားကိုကျတော့ သူများသားသမီးကို မရိုက်ရဘူးလို့တော့ တစ်ချက်မှ မပြောပါဘူး။ ကျွန်မကိုချည်း လှိမ့်ဆဲပါတယ်။ အခန်းနံရံ ၅ ထပ်သားပြားတွေကိုလဲ ထုရိုက်စောင့်ကန်ပြီး အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားလို့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပြောပါတယ်။ မိုက်ရိုင်းလိုက်တာကလဲ ကန်းကုန်ပါ။ အဲ့နေ့ကစပြီး အဲ့အဘွားကြီးကို အရမ်းကြောက်သွားပါတယ်။ အခန်းထဲမှာပဲအောင်းနေမိပါတယ်။ သူ့အသံကြားတာနဲ့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ လန့်နေမိပါတယ်။
ညဆိုလဲ အိပ်မပျော်တော့ပါဘူးဆရာ။ တစ်ညလုံးလဲ မအိပ်တော့ပါဘူး။ အသံနဲနဲကြားတာနဲ့ နှလုံးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်ပြီး ထိတ်လန့်ပြီး အိပ်လို့မပျော်တော့ပါဘူးဆရာ။ စိတ်ကလဲ မရွှင်လန်းတော့ပါ။ အချိန်ပြည့် ငါ့ကို ဘယ်တော့ ဘာတွေများ ပြောလာမလဲဆိုပြီး စိုးရိန်ထိတ်လန့်နေပါတယ်။ အခုက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချထားလို့လဲ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ စိတ်အားငယ် အထီးကျန်ပြီး နေနေရပါတယ်ဆရာ။ အဲ့နေ့က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းတွေ အသံတွေကိုပဲ မြင်နေကြားနေရပါတယ်ဆရာ။ အဲ့အဘွားကြီးကို ဟိုဆရာမလိုပဲ အရမ်းမုန်းပြီး ရွံ့ကြောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ဘယ်လို ရောဂါရှိနေလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ညညလဲ နှစ်နှစိခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ချင်ပါတယ်ဆရာ။ ငယ်ငယ်ထဲက ခံစားလာခဲ့ရတဲ့ရောဂါဟာ ဘာရောဂါလဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ပြောပြပေးပါရှင့်။ ဘာဆေးတွေမှီဝဲသင့်လဲ ဆိုတာကိုလဲ လမ်းညွှန်ပေးပါရှင့်။
ဆောရီးနှစ်ခုတွေ့တယ်။ ကြောက်စိတ်နဲ့ (အလာဂျီ)။ အလာဂျီကတော့ ဖြစ်တတ်တာကိုရှောင်ဘို့နဲ့ ဖြစ်လာရင် Cetrizine tablet သောက်ဘို့နဲ့ အင်ပြင်ထွက်လို့ယားတာကို Calamine lotion လိမ်းလို့ဖြစ်တယ်။
ကြောက်စိတ်ကတော့ ဘာကိုကြောက်သလည်း သိနေတယ်လို့ထင်တယ်။ အဲတာကိုရှောက်ဘို့ဆိုတာ ခက်ခဲနေတာလည်း နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာလည်း ဆောရီးနှစ်ခါ။
ကျွန်တော်နေခဲ့စဉ်က ဆေးကုသပေးခဲ့သူ။ တနေရာမှာနေထိုင်သူ လူနာတယောက်နေ လှမ်းပို့ပေးလို့ရောက်လာတဲ့ ကံ့ကော်ပင်ကို ပုလဲမြို့၊ ပါရမီရပ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဆေးခန်းနဲ့အိမ်ကလေးမှာ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေက စိုက်ပေးကြတယ်။
အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေ အမှတ်တရသစ်ပင်စိုက်ပေးကြတဲ့ အလေ့အထရှိတယ်။ အလွန်ကောင်းလှပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဆေးခန်းလေးမှာ အခုလိုစိုက်တာကတော့ အမှတ်တရမမေ့ကြသူတွေကနေ ပွဲလမ်းတွေမပါ စိုက်ပေးကြတာ။ အထင်ကရတွေလည်းမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ဘဝထဲက သမိုင်းလေးတခုတော့ အမှန်ဖြစ်သွားပါတယ်။
- ဗမာပြည်ကို သတိရစရာလေး ရေးလိုက်ရင် ထင်ကြတယ် လွမ်းနေပြီလို့။ စားစရာလေးရေးလည်း မေးကြတယ် လွမ်းလာပြီပေါ့လို့။ တခါတင်လို့ တခါသာမြင်သူတွေက အခုမှလို့သာ ထင်ကြတာ။
- လွမ်းလှချည်ရဲ့ တမ်းလှပြီကွဲ့လို့ မရေးပါ။ ကိုယ့်ဆီမှာ ဂုဏ်တင်စရာတွေရှိတယ်၊ မချမ်းသာပေမယ့် မနွမ်းတာတွေရှိတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
- ဝေးနေလို့ ဆွေးနေတယ်ထင်သွားရင် အားအင်တွေဆုတ်၊ မိသားစုအတွက်မလုပ်နိုင်၊ တိုင်းပြည်အတွက် လုံ့လမထုတ်နိုင်ကြတာ မဖြစ်စေချင်ပါ။ အဝေးမှာလည်း ဗမာ့အရေးနဲ့ ဗမာ့အငွေ့ကို မမေ့တဲ့သူ၊ ဗမာ့အစာကို ဆာတတ်သူ ရှိလေရဲ့လို့ သိစေချင်တာပါ။
- ဇရစ်ဖူးပါရင် အဲဒီဆရာအတူ ကူစားသလို တထွာတညိုအပိုသာ ကဲပေးကြပါ။ မဲပေးတာလည်း မမှားကြနဲ့ပေါ့ဗျာ။
ပို့စ် = Kothetnaing Kothetnaingoo အိမ်အပြန် အခု ရာသီက ဇရစ်ပေါ်တာမို့ လမ်းတလျှောက် ဇရစ်စည်းလေးတွေ ရောင်းနေတာကို မြင်ခဲ့ရတယ်။ ၅ဝဝ ဖိုး ၇ စည်း။ ဇရစ်ကို ဘယ်လိုချက်စားမလဲ။
ကွန်မင့်မှာ ချက်နည်းတွေလည်း အမျိုးမျိုးဖတ်ရတယ်။
ကျွန်တော်တော့ မစားရတာကြာပြီ။ သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ တခါခါရပါရဲ့ ငယ်ငယ်က အမေချက်ကျွေးတာကိုသာ သတိရတယ်။ မုံရွာ သာစည်လမ်းဈေးက ဝယ်ရတယ်။ အမေ့ချက်နည်းတွေထဲက အရည်သင့်သင့်၊ ဆီနည်းနည်းနဲ့ ငါးပိခပ်ပြီး၊ ငရုပ်သီးခြောက်မှုံ့နဲ့ အစပ်ချက်တာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ပြုပ်ပြီးတို့စားတာလည်းကြိုက်ပါတယ်။
မုံရွာ၊ သာစည်လမ်းဈေးဓါတ်ပုံကို ၁၃-၃-၂ဝ၁၄ နေ့က ရိုက်ပို့ထားတာ။
သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေကနေ ထွက်တဲ့ အခိုးအငွေ့တွေက ပန်းနာရှိနေသူအတွက် ပိုဆိုးတယ်။
Bleach ဖြူဖွေးစေတဲ့ဆေး၊ Glass cleaner မှန်သန့်စရာတွေ၊ Detergents ဆပ်ပြာအမျိုးမျိုး၊ Fresheners လေသန့်ဆေး တွေကနေ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ ပန်းနာရှိနေရင် ဆိုးစေတယ်လို့ ကနေဒါ မွန်ထရီရယ် တက္ကသိုလ်က လုပ်တဲ့ နောက်ဆုံးသုတေသနအရ အခုလိုပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Ye Hla Rural health with surgery and one of the most utilized station hospital. From hospital statistics, 1980 maybe
ဆရာ့မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ မျက်စိထဲမှာ မြို့သာတိုက်နယ်ဆေးရုံနဲ့ ပုလဲမြို့နယ်ဆေးရုံက ခွဲစိတ်လူနာ မှတ်တမ်းစာအုပ်တွေကို ပြန်မြင်မိတယ်။ ဆိုက်ရှည်စာအုပ်တွေက သုံးရဖန်များတော့ ဟောင်းနွမ်းကျေမွနေကြတယ်။ ဒေါင်စွန်းတွေဆို ခေါက်တွန့်နေကြပြီ။ ဒေတာကို စာအုပ်ထဲမှာသာစုဆောင်းတဲ့ခေတ်ကပေါ့။
ဒေလီ ယမုန်နာဒုက္ခ္ခသည်ဆေးခန်းလေးမှာလည်း မွေးလူနာမှတ်တမ်းနဲ့ ခွဲစိတ်လူနာမှတ်တမ်းတွေထားခဲ့တယ်။ ကွန်ပြူတောခေတ်မို့ ဆေးခန်းကနေ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဆေးခန်း (ဘလော့ခ်) မှာ တခါတည်းတင်တယ်။ ကြာတော့ မွေးလူနာလောက်သာ တင်နိုင်တော့တယ်။
ခွဲလူနာမှာ ပြည်ပေါက်တဲ့အနာကအစ မှတ်တာဆိုတော့ များတယ်။ ထုံဆေးပါရင် စာရင်းသွင်းတယ်။ သွားနုတ်တာကအစပေါ့။ ဆေးခန်းမပိတ်ခင် ၄ နှစ်ကျော်ကတည်းက ခွဲလူနာစာရင်းကို ဘလော့ခ်မှာ မသွင်းနိုင်ခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးစာရင်းမှာကတော့ 559 25/2/10 Van Lal Hrin6M L/W head S, C and D LA TP
နံပါတ်စဉ် (၅၅၉)၊ ၂၅-၂-၂ဝ၁ဝ အမည် ဗန်လားလ် ဟရင်၊ (၆) နှစ်၊ ယောက်ျားလေး၊ ခေါင်းပေါက်လို့ ထုံဆေးနဲ့ ချုပ်ပေး၊ ကူတဲ့ဆရာမ (မတာပီး)။
ခွဲစိတ်လူနာမှတ်တမ်းစာအုပ်တွေမှာ ကော်လံခွဲတဲ့မျဉ်းကလည်း အစိတ်အကျဲမညီပါ။ ခဲတံနဲ့သားလိုက် မင်တံနဲ့သားလိုက်။ လူနာတယောက်နဲ့တယောက် မျဉ်းတကြောင်းခြား မှတ်သားတဲ့စနစ် လုပ်ထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လူသစ်ကဝင်လုပ်ရင် ဆက်ရေးတာတို့ ခြားရေးတာတို့လည်း ပါတာပေါ့။ ဖေါင်တိန်မင်ရောင်နဲ့ လက်ရေးတွေကလည်း အမျိုးမျိုးပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အဲဒီမှတ်တမ်းစာအုပ်တွေကို သိပ်တန်ဘိုးထားတယ်။ ခုလောက်ဆို အဲဒီမှတ်တမ်းစာအုပ်တွေ မရှိကြတော့ဘူးပေါ့။
ဓါတ်ပုံ = ကျွန်တော့် ခွဲစိတ်ပညာစာအုပ် (၃) အုပ်ကို ရေစကြိုနေ ဒေါက်တာကျော်ငွေက ငှားထားခဲ့တာကို သူကနေ ဓါတ်ပုံရိုက်ပို့တာပါ။ ပုလဲအိမ်မှာသာထားရတာဆိုရင်တော့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးကနေ အကြမ်းဖက်မှုသက်သေဆိုပြီး အမှုလုပ်နိုင်တယ်။ ရှိရှိသမျှစာအုပ်စာတမ်းတွေအားလုံးလည်း တိုင်းပြည်ကမထွက်ရခင်မှာ ဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တတ်တဲ့ပညာကိုတော့ သူတို့ ဖျက်မပြစ်နိုင်ကြပါ။
ကိုလေးအင်းဝဂုဏ်ရည်က ဆရာဝန်နဲ့ သူနာပြု သူငယ်ချင်းစုံတွဲကို သီချင်းလက်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာ အခုပဲသိရတယ်။
ဆရာကိုလေးနဲ့ လူချင်းဆုံပြီး စကားမပြောဖူးသေးပါ။ သူ ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကို ရောက်ခဲ့ဖူးတာလည်း မသိလိုက်ပါ။ မြို့သာတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျတုံးကဆိုတော့ နှစ်ပေါင်း ၄ဝ လောက်က ဆရာ့မှာ ကိုယ်ဖျောက်ပညာရှိခဲ့ပုံရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဆရာကရေးပါတယ်။ ခင်ဗျားတော့ ကြောက်ပ၊ လက်ထဲဓါးကမချဘူးတဲ့။
ဆရာကိုလေး တံတားဦးကနေ ၂၁ မိုင်ဝေးတဲ့ မြို့သာကိုလာလည်တုံးမှာ ကျွန်တော်က မနက်ခင်း အပြင်လူနာတွေရှင်းပြီး၊ အဲဒီအခန်းတွင်းမှာပဲ ခွဲစိတ်လူနာကို ခွဲနေတုံးဖြစ်ရမယ်။ လျှပ်စစ်မီးကရှိတာမဟုတ်လို့ အခန်းတံခါးမကြီးကို ဟင်းလင်းဖွင့်ထားပြီး ရင်သားကင်ဆာခွဲနေတာ တွေ့သွားပုံရတယ်။ ကဗျာဆရာ ကြောက်ရှာမှာပေါ့။
အဲဒီတုံးက စမတ်ဖုံးနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်တွေမပေါ်သေးတာ ကံကောင်းတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်တင်ကြရင် ဆရာဝန် တရားစွဲခံရနိုင်တယ်။
ဓါတ်ပုံ = ကျွန်တော်ရှိစဉ်ကဆောက်ခဲ့တဲ့ မြို့သာတိုက်နယ်ဆေးရုံသစ်ရှေ့မှာ ဆေးရုံကော်မတီ မိတ်ဆွေရင်းများနဲ့။ ဆေးရုံဟောင်းပုံမရှိပါ။
Stem cells can be safely infused in brain to promote stroke recovery
Stroke (စတုပ်) ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါဖြစ်သူကို မြန်မြန် သက်သာအောင် ဦးနှောက်ထဲကို (စတမ်ဆဲလ်) သွင်းပေးနိုင်တယ်လို့ ၂၁-၅-၂ဝ၁၅ နေ့ထွက်လာတဲ့ ဆေးသုတေသနသတင်းအရသိရပါတယ်။
ပေါင်ခြံသွေးလွှတ်ကြောကနေတဆင့် ဦးနှောက်သွား (ကရိုးတစ်) သွေးလွှတ်ကြောထဲထိ (ကသီတာ) ပြွန်သေးသေးလေးနဲ့ (စတမ်ဆဲလ်) တွေကို ထိုးပေးတယ်။
စမ်းသပ်နေတာတနှစ်ရှိပါပြီ။ (စထုပ်) ရထားတဲ့လူနာ ၄၈ ယောက်ရဲ့ရိုးတွင်းခြင်ဆီကနေ (စတမ်ဆဲလ်) တွေယူပြီး ထိုးတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့ Interdisciplinary Stem Cell Institute မှာလုပ်နေတာပါ။ (စတမ်ဆဲလ်) တွေကလည်းသက်ရှိမို့ သွေးစီးလျှောက်တာကိုနှေးစေမှာ သတိထားရတယ်။ ခုထိစမ်းသပ်တာမှာ အဲလိုဖြစ်တာ မတွေ့ရပါ။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီကနေ (စတမ်ဆဲလ်) တွေကိုထုတ်ယူပြီး ၄၈ နာရီကြာသန့်စင်ထုတ်ယူရတယ်။ ၄၈ ယောက်ထဲမှာ ၁၉ ယောက်ကိုတော့ အဲလိုထိုးမပေးပါ။ ၂၄ နာရီမှာ စစ်ဆေးမှုလုပ်တယ်။ MRI scans ရိုက်တယ်။ နောက် ရက် ၉ဝ၊ ၁၈ဝ နဲ့ တနှစ်အကြာမှာထပ်စစ်တယ်။ လူနာအားလုံးကို ပေးနေကြကုထုံးအရလည်း ကုသပေးပါတယ်။
(စတမ်ဆဲလ်) ထိုးပေးသူတွေမှာ ကြွက်သားလှုတ်ရှားမှုနဲ့ စကားပြောတာမြန်မြန်ပြန်သက်သာလာကြတာတွေ့ရတယ်။
- တမနက်လုံး အဆီအငေါ်မတည့်လှတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ နပမ်းလုံးနေတုံးမှာ သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီက (ကွန်မင့်) တခု ဖတ်ရတယ်။ သူကလည်း ဆရာဝန်ပဲ။
- သူငယ်ချင်း မင့်း့ ရာနှုန်းပြည့်ဆာဂျင်ပဲကွ။ မင်းလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ သားကြောဖြတ်လူနာ ၁ဝဝ% အောင်မြင်တယ်။
- အေ့း့ သူငယ်ချင်း သူကိုမေးလိုက်ပါကွာ။ သားကြောပြန်ဆက်ချင်သေးလားလို့။ ငါ့စိတ်ကူးထဲက နည်းအရဆိုရင် ပိုက်လေးနှစ်ခုတော့ လိုမယ်ကွ။ ဟို့့ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လောက်ဆိုရပြီလို့။
ငိုမနေနဲ့တော့၊ အဲတာက ပြီးသွားပြီပဲ။ ပြုံးလိုက်စမ်းပါ၊ အဲတာကအခုဖြစ်နေတာ။ အမေရိကန်စာရေးဆရာ Dr. Seuss ရဲ့ စကားပါ။ သူက ကလေးစာအုပ်တွေ အများကြီးရေးသွားခဲ့တယ်။
- Vasectomy ယောက်ျား သားကြောဖြတ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/vasectomy.html
- Vasectomy reversal ယောက်ျား သားကြောပြန်ဆက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vasectomy-reversal.html